International Hotel Projects - Armati Ihhotela Project EYurophu
ULwesibili, June 23, 2015 12: 31: 02 AM America / Los_Angeles
Enye yezinto Armati 5 ukuqala hotel project eYurophu, wamukelekile ukuba vakashela leli hhotela ukubona isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu yethu.
Armati 413 uchungechunge isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu catalouge sicela uhlole okulandelayo:
Along onguthelawayeka Florence-Siena, omunye uyamangala ukuthi leso sakhiwo esisha futhi Futuristic, esikuthola Bargino emzaneni (eduze San Casciano Val di Pesa), kungaba.
Kuba winary entsha Antinori, umphumela yeprojekthi ambitious ngokuqinile wayefuna Family Antinori sika, ngubani ikhiqiza iwayini 26 izizukulwane, ngemva kwamakhulu amahlanu, iqhubekela ekomkhulu layo kusukela maphakathi Florence kuya inhliziyo "Chianti Classico" .I emiphongolweni kwaba wakha ababemba e sentsaba bese ukumboza wokwakha emhlabathini.
Le project Winery entsha (ukuthi ulihlonipha kakhulu imvelo Tuscan kanye landscape) uhlukile ngoba ihlanganisa emisha yezakhiwo kanye nobuchwepheshe besimanje iwayini making nesiko lomndeni lingabi Antinori sika.
Leli hhotela opend ngoFebhuwari 2013.
Ihhotela yokugezela project eYurophu
hotel project yokugezela isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu